Soomaaliya weli waa dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSoomaaliya weli waa dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida
Soomaaliya weli waa dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida
January 29, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Shanta wadan ee ugu nadiifsan dunida oo ay hoggaaminayso Denmarka iyo Soomaaliya oo ah dalka ugu musuqa badan iyo wadamada ku xiga ayaa laga arki karaa sawirkan.
Berlin-(Puntland Mirror) Soomaaliya waa dalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka, sida ay warbixin sanadeedka 2018-ka ku sheegtay haayada kor-joogtaysa musuqmaasuqa dunida.
Warbixin sanadeedka haayada Transparency International oo fadhigeedu yahay magaalada Berlin ay maanta oo Talaado sii daysay ayay ku sheegtay Soomaaliya dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida, iyadoo heysata 10 dhibcood boqolkiiba. Wadamada Suuriya, Koonfurta Suudaan, Yeman, Waqooyiga Kuuriya, iyo Suudaan ayaa ku xiga.
Denmark ayaa noqotay dalka ugu nadiifsan 180 dal oo ay haayada Transparency International qiimeynta ku sameysay.
Soomaaliya oo colaado sokeeye iyo ururo argagixiso la dageen 27-sanno ee u dambeysay, ayaa kaalinta kowaad kaga jirtay dalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka dhowrkii sanno ee lasoo dhaafay.
Xukuumada hadda jirta ee Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ololihiisa ku galay in uu dagaal adag la geli doono musuqa, balse weli ma ay jirto ififaalo muuqata.
February 22, 2018 Soomaaliya oo noqotay dalka ugu masuqmaasuqa badan caalamka
Madaxweynaha Dowladda Puntland oo qaabilay qunsulka cusub ee Itoobiya
The coronavirus pandemic has wreaked havoc on trade and supply chains around the world. Not even the niche market in camels is immune. Somalia usually ships millions of camels, goats, sheep and cattle across the [...]
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo shir ku saabsan maalgashiga uga qeybgali doona Turkiga
Garoowe-(Puntland Mirror) Wefdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa maanta oo Arbaco ah u safray dalka Turkiga. Weftiga ayaa waxaa kamid ah wasiiro, xildhibaano iyo ganacsato kuwaasoo halkaas uga qeybgali doona [...]